Serivisy fitantanana fanadiovana tsara indrindra ho an'ny fitantanana fananana
Ataovy mandeha ho azy ny fitantanana fanadiovanao - na amin'ny mpiasa ao an-trano izany na amin'ny alàlan'ny fifanarahana amin'ny orinasa mpanadio ivelany.
Amin'ny toe-javatra mora indrindra, ny mpanadio na ny orinasa mpanadio no miandraikitra ny fanadiovana trano. Mila manana fidirana amin'ny daty sy ora sy fahatongavana ary fiaingana izy ireo, antsipiriany momba ny isan'ny vahiny hipetraka, ny fomba tokony hatsangana ny fandriana, ary ny fangatahan'ny vahiny manokana. Ny fepetra takiana amin'ny mpitsidika nomena dia mety hanova ny lalana hatreo amin'ny teboka fahatongavany, koa ankoatry ny fampandrenesana ireo mpikarakara trano rehefa tonga ny famandrihana dia mila havaozina hatrany ihany koa izy ireo amin'ny fanovana rehetra. Mandany fotoana be izany rehetra izany.
Ankoatr'izay, ny orinasam-pitantanana fanofana fialan-tsasatra lehibe kokoa misy fananana manerana ny toerana maro dia matetika no mampiasa mpikarakara tokantrano maro an'ny orinasa manadio, ary mila manamboatra isan'andro isan'andro izay tokony hadinanan'ny mpanadio, ekipa na orinasa iray izay manadio. Na dia amin'ny tranga ahafahan'ny mpanadio miditra aza mijery kalandrie, ny ankamaroan'ny PMSes dia tsy manolotra fahaiza-mitantana asa efa mandroso, mamela ny fandaharam-potoana fanadiovana antonony hijanonana mandritra ny fotoana lava kokoa sy ny fanendrena asa ho an'ny mpampiantrano, noho izany dia mandray be dia be ny fotoanany miaraka amin'ny admin.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's Management Management manampy?
Ny asa fikarakarana ao an-trano dia vokarina ao Zeevou, na amin'ny fanaraha-maso izany na amin'ny fanadiovana eo afovoany. Ny diovina afovoany dia mijanona mitovy mandritra ny faharetan'ny fijanonany, ka amin'ny famandrihana valo alina ao amin'ny trano iray misy fanadiovana isan-kerinandro, ohatra, dia asaina fikarakarana trano no kasaina 4 andro.
Ho an'ny mpikarakara tokantrano tsirairay dia azonao atao ny manondro ny fisian'izy ireo mandritra ny herinandro, ary mampifandray azy ireo amin'ny fananana manokana miaraka amin'ny laharam-pahamehana. Ny mpikarakara trano dia afaka mangataka ravina amin'ny alàlan'ny fampiharana finday raha toa ka mila miala sasatra mandritra ny ora / andro vitsivitsy izy ireo. Vantany vao ankatoavin'ny admin ny fialan-tsasatra dia havaozina ny fahafahany misy.
Izahay dia namolavola algorithm fizarana tena mandroso izay manandrana manatsara ny fizarana ny asa an-trano ho an'ny mpikarakara tokantrano miorina amin'ny ora fanamarinana sy fizahana, ny fahazoana voatondro ho an'ny mpanadio tsirairay ao amin'ny rafitra, ny salan'isan'ny fotoana hanadiovana azy vondrona sy ny dia eo anelanelan'ny fananana.
Ny fizarana ny asa ao an-trano dia voamarika vonjimaika mandra-pahatongan'ny fotoana fahatapahana namboarina ny hariva alohan'ny hanatanterahana ilay asa. Amin'izay fotoana izay dia ampandrenesina ireo mpikarakara trano momba ny fizarana vola nomeny. Azonao atao ny mandresy tanana ny mpikarakara tokantrano natokana ho an'ny asa iray.
Ny mpikarakara trano dia afaka mahita ireo lahasa ao aminy finday fampiharana ao anatin'izany ny satan'ny, ny fotoana ary izay naoty sisa navelanao ho azy ireo. Raha vantany vao tonga izy ireo dia misambotra ny fotoana sy ny toerany ny rafitra ary toy izany koa rehefa vitan'izy ireo ilay asa. Azonao atao ny mitaky ny mpikarakara tokantrano haka sary ny efitrano tsirairay voalaza ao amin'ny rafitra ho an'io singa io (karazana unit). Tsy avela handefa sary izy ireo hanakanana ny sary nalaina tamin'ny hadio hafa mba hampiasa indray. Raha tsikaritr'izy ireo fa misy olana momba ny fikolokoloana dia azon'izy ireo atao ihany koa ny mitatitra izany amin'ny alàlan'ny fampiharana. Ireo dia miafara amin'ny Zeevou Fix, izay ahafahanao manara-maso ny fivoaran'ny olan'ny fikojakojana.